သင့် iPhone ၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သော Xiaomi Mi Band2[video] | ငါက Mac ကပါ
သင့် iPhone ၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သော Xiaomi Mi Band2[ဗီဒီယို]
လူကြိုက်များသောတရုတ်လူမျိုးတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လူသိများသောစျေးနှုန်းချိုသာသောလက်ကောက်ကိုအသစ်ပြန်တပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းပြောဆိုပါ Xiaomi က Mi Band 2ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးကိုတိုင်းတာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုင်းတာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ pulsations များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် iPhone ၏ပြီးပြည့်စုံသောမဟာမိတ်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြသသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ Applelizados မှာငါတို့ခြွင်းချက်လုပ်ထားတယ် Xiaomi က Mi Band2ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၊ သူ့ရဲ့ယခင်ဗားရှင်းကိုတစ်နှစ်ခွဲကြာအောင်အသုံးပြုပြီးနောက်၊ Apple Watch သုံးစွဲသူတစ်နှစ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ ဒါကအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲဖို့ဝယ်လို့ရတဲ့အကောင်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ iPhone ကိုအတူတူ။
Xiaomi က Mi Band2| ပုံရိပ်: Powerplanetonline.com
La Xiaomi က Mi Band2ဒီဝတ်ဆင်၏ပထမမျိုးဆက်ကနေသိသာအရည်အသွေးခုန်ကိုယ်စားပြုတယ်။ ယခုaOLED မျက်နှာပြင် မြင့်မားသောခုခံနှင့် စားသုံးမှုနိမ့် ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့အချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်ကိုထိရုံနဲ့ကြည့်ရှုခွင့်ပေးတယ် တစ်ခုတည်းထိတွေ့ခလုတ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ယခုအသုံးပြုမှု၏အဓိကကောင်းကျိုးများအနက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည် app ကိုဖွင့်ရန်မလိုတော့ခြင်းဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်၏ Fit ငါတို့လက်ကောက်ဝတ်မှာအရာအားလုံးရှိနေတာကြောင့်ငါတို့လမ်းလျှောက်ခဲ့သည့်အကွာအဝေး၊ ခြေလှမ်းများလှမ်းလိုက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးခုန်နှုန်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မီးရှို့ခဲ့သောကယ်လိုရီများကိုစစ်ဆေးရန်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Xiaomi က Mi Band2သင်၏ system algorithm ကိုတိုးတက်ခဲ့ပြီးယခုဖြစ်သည် ပိုမိုတိကျသည် ဒါကြောင့်ခြေလှမ်းများရေတွက်, ကျချိန်တိုင်းတာ, နှင့်ပတ်သက်။ အခါ။
နှင့်မျက်နှာသာအတွက်အကြီးအအချက်များအခြား၎င်း၏ဖြစ်ပါတယ် ကြီးစွာသောခုခံ။ သင်လက်ကောက်ကိုကောက်ယူလိုက်သည်နှင့်၎င်းသည် "စျေးပေါသောပလပ်စတစ်" မဟုတ်ကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဟုတ်တယ် အဆင်ပြေခံနိုင်ရည်မရှိဘာမှအလေးချိန် နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ IP67 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ် ရေနှင့်ချွေးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်.
၏အဓိကဝိသေသလက္ခဏာများအချို့ Xiaomi က Mi Band2သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
၀.၄၂ လက်မ OLED မျက်နှာပြင်
သင်သည် Xiaomi စမတ်ဖုန်းမော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုပါကအလိုအလျောက်သော့ဖွင့်နိုင်သည်။
Xiaomi Mi Band2နဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
La ကျနော်တို့2Band ၎င်းသည် ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာဖြစ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသမားများ၊ အပျော်တမ်းသမားများသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်လို။ တိုးတက်လိုသောမည်သူမဆိုအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ ဒါဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်:
ဒီအရာအားလုံးကိုမင်းကမလိုအပ်ဘဲဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကပြေးနိုင်၊ အိပ်နိုင်၊ ရေချိုးနိုင်ပြီးကမ်းခြေကိုတောင်သွားနိုင်လို့ပါ။
အကယ်၍ သင့်အားစဉ်ဆက်မပြတ်အသိပေးချက်များဖြင့်ဖိအားမပေးနိုင်သည့်အလွန်ဂရုတစိုက်နှင့်ကြော့ရှင်းသောဒီဇိုင်း၊ ခုခံနိုင်မှုမြင့်မားမှုနှင့်စျေးနှုန်းနီးပါးဖြင့်သင့်ကိုဖိအားမပေးသောတွက်ချက်သည့်လက်ကောက်ကိုလိုချင်လျှင် Xiaomi Mi Band2ကိုဝယ်ပါအကယ်စင်စစ်သင်သည်နောင်တရလိမ့်မည်မဟုတ်။ အကယ်၍ သင်ယခင်မော်ဒယ်များကို screen မပါဘဲပိုနှစ်သက်ပါက Mi Band 1 သို့မဟုတ် Mi Band 1s များကိုယခုထက် ပို၍ စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့ကို YouTube ပေါ်မှာငါတို့ Applelised ရုပ်သံလိုင်း၏ဤဗီဒီယိုကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အတူငါထားခဲ့ပါ။ စာရင်းသွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်! 😘
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » သင့် iPhone ၏အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သော Xiaomi Mi Band2[ဗီဒီယို]
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်မကိုက်ညီပါက Runtastic application မဟုတ်ပါ
မင်္ဂလာပါ Miguel မထင်ပါဘူး Xiaomi Mi Band ၏လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည် Mi Fit app ကိုယ်တိုင် (သင်တန်း) နှင့် iPhone ၏ Health app နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ ထိုတွင်ရှိသောလက်ကောက်နှင့်တိုင်းတာသည့်အချက်များအားလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၎င်းသည် Runtastic ကဲ့သို့အခြားအက်ပလီကေးရှင်းနှင့်မကိုက်ညီပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်တော်မတော်တဆ ၀ င်ရောက်လာပြီးခင်ဗျားရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုမြင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် appStore ကနေငါ့ HR လို့ခေါ်တဲ့ application တစ်ခုကို download လုပ်ရမယ်လို့မင်းကိုပြောပါရစေ။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးပါက၊
1.- သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ Fit ကိုလက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်
2.- miHR တွင်သင်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုသက်ဝင်စေသည်
၃။ runtastic တွင်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းကိုအနည်းငယ်အကြမ်းဖျင်းရှင်းပြထားသော်လည်းသင် Google သို့မဟုတ် YouTube ၌ရှာဖွေလျှင်၎င်းမည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုသေချာပေါက်တွေ့လိမ့်မည်
ဂျာ ier ဟုသူကပြောသည်
Ja ier အားပြန်ပြောပါ
လီလီ pe ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Android band ကဲ့သို့ mi band2သည် iphone နှင့်သဟဇာတဖြစ်မဖြစ်သိလိုသည်။ အခြား application များထံမှအသိပေးချက်ကိုလက်ခံခြင်း၊ လျှောက်လွှာများပြောခြင်း) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Lili pe အားစာပြန်ပါ
ကျွန်ုပ်၏ band ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်မည်သည့် application ကိုကျွန်ုပ်၏ iphone ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည်ကိုသိလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ fit ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးပြီ။ ၎င်းမှာစပိန်ဘာသာမဟုတ်ပါ။
မင်္ဂလာပါ။ သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါသိချင်တာကမင်းကလက်ကောက်ရဲ့ဖန်သားပြင်ထဲကနေကယ်လိုရီတွေမြင်နိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်အက်ပလီကေးရှင်းကိုသွားဖို့လား။
အခြား myban2 iphone app ရှိပါသလား။ ငါဖျက်လိုက်တာနဲ့သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်လို့မရတော့ဘူး။ နောက်တစ်ခါထပ်တပ်လို့မရတော့ဘူး
ဟိုင်း!! ခင်ဗျားရဲ့မှတ်ချက်ကို Maricuchy ငါမင်းကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ရေးထားရင်မင်း iPhone iPhone မှာမက္ကဆီကန်စပိန်ကိုရွေးရမယ်လို့ငါပြောမယ်။ သတိပေးချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တွင် iPhone6 ​​ရှိပြီးမည်သူမျှကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုရုံ အဘယ်သူမျှမငါ့ကိုအဖြေတစ်ခုပေးသည်